Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ abụba AASraw
/blog/Orlistat/Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ abụba
Ihe na 04 / 02 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Orlistat.
Ihe niile gbasara Orlistat ntụ ntụ
1.What bụ Orlistat?
2. Kedu ihe bụ Orlistat ntụ ntụ?
3.How ka Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ?
4.Gịnị mere anyị ji họrọ Orlistat maka ndụ ndụ ka mma?
5.Gịnị bụ uru nke Orlistat ntụ ntụ?
6.Is Orlistat ntụ ntụ dị irè?
7. Ego ole ka m ga-eji Orlistat ntụ ntụ mee?
8.Olee ka m ga-eji Orlistat ntụ ntụ?
9.What bụ usoro onyonyo maka ntụ ntụ Orlistat?
10.Which ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ihe mgbakwunye na Orlistat?
11. Mmetụta akụkụ nke Orlistat ntụ ntụ
12.Fat ọgwụ mgbu Orlistat-ọ bụ ezigbo nhọrọ maka m?
13. Orlistat ntụ ntụ VS Sibutramine ntụ ntụ
14. Phentermine ntụ ntụ VS Orlistat ntụ ntụ
15.Abara uru nke ịzụta Orlistat ntụ ntụ si AAS Orlistat ntụ ntụ soplaya:
I.Orlistat ntụ ntụ isi Characters:
Orlistat ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka Xenical, bụ ọgwụ e ji eme ihe maka ibu ibu. Ọrụ ya bụ isi na-egbochi nsị nke abụba si nri mmadụ, si otú ahụ belata ihe oriri caloric, wee nye aka mee ka abụba abụba. Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ site n'imebi pancreatic lipase, enzyme nke na-akụda triglycerides na eriri afọ, usoro ọrụ ahụ dị iche na Sibutramine ntụ ntụ na Clenbuterol ntụ ntụ.
Xenical (Orlistat raw powder) bụ ihe enyemaka dị arọ nke enyemaka na-eri nri obere-kalori na mmekorita ọma nke dọkịta. Ọ na-enye aka ịnọgide na-enwe nrụgide mgbe ọ na-efu ọnwụ. Ọ bụ maka ndị okenye nanị. Orlistat raw powder is used in patients with a weightweight nke nwekwara ike inwe ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọrịa obi.
Orlistat ntụ ntụ dị na otu ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi lipase. Ọ na-arụ ọrụ na eriri afọ gị, ebe ọ na-egbochi ụfọdụ n'ime abụba ị na-eri site na ịmịnye ya ma kpochapụ. A na-ewepụ abụba a na-enweghị isi na njiko obi gị (BM).
2.What bụ Orlistat ntụ ntụ?
Ụdị: White ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụ ìhè odo crystalline ntụ ntụ
Solubility: Mmiri na mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, Acolu acid, ethyl ester
Efu na ihicha: ≤0.5%
Metal igwe: ≤10ppm
Oge mmalite: 20 minites
N'uzu: Nkwa ọgwụ
Orlistat ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka Xenical dịka Orlistat raw powder name for generic Orlistat powder, nke a na-eji na ọgwụgwọ ibu. O nwere mmetụta dị otú ahụ maka ụfụ abụba dị ka sibutramine, clenbuterol, Orlistat ntụ ntụ na-egbochi ahụ gị ka ọ ghara ịmịba abụba site na nri ị na-eri. Site n'ibelata oke abụba nke a na-etinye, Orlistat raw powder can help you to lose weight more easily. N'ihi na Orlistat ntụ ntụ mmeju enyere ndị mmadụ akafu arọ ọ nwere ike inye aka gbochie ọnọdụ ahụike ndị metụtara oké ibu na oke. Ibu oke na-ejikọta ya na ọrịa 2 ụdị ọrịa shuga, ọrịa obi, ọbara mgbali elu, na ụra na-ehi ụra, nke nwere ike ịkpata nsogbu ahụike ọzọ. Ịkwụsị ibu ibu bụ otu n'ime ndụmọdụ ndị ọkachamara kachasị dị na ya mgbe ọ na-abịa n'ịdịwanye elu ahụike na ogologo oge.
Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'ime obodo n'ime eriri afọ (eriri afọ). abụba ọkpụkpụ Orlistat na-arụ ọrụ site na igbochi enzymes (lipases) site na ịkụda abụba n'úkwù na ikwe ka ọ gabiga n'ime ahụ ahụ. Nke a na - eme ka ọnụọgụ calorie nke ahụ na-ebelata. N'ihe atụ aro nke 120 mg ugboro atọ n'ụbọchị, Orlistat raw powder na-ebelata ikikere nke 30 percent.Although Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ nhụsịrị dị arọ, ọ bụghị oke ọrụ ebube ọnwụ Orlistat arw. ... Orlistat ntụ ntụ dị irè iji gbochie nsị absorption na nri gị nke ga-enyere aka belata ịṅụ oriri calorie. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkụda calorie gị na-eri nri banyere ihe dịka calories 500 kwa ụbọchị.
Orlistat ntụ ntụ bụ nke a na-akpọ ndị na-emechi lipase. Ọ na-egbochi eriri afọ ahụ site na-emetụ banyere 25% nke abụba ị na-eri. Ndị na-adịghị etinye obi gị dum na-ahapụ ahụ gị site na mmegharị obi. Ụfọdụ data na-atụ aro na Alli na-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ nke abụba anụ ahụ na-akpọkarị ọrịa visceral, bụ nke ejikọtara ya na ụdị ọrịa shuga 2, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, na ọrịa strok.
4.N'ihi gịnị ka anyị na-ahọrọ Orlistat ntụ ntụ maka ndụ ndụ ka mma?
N'oge a, oke ibu na - aghọ nsogbu nsogbu, ma ọ bụrụ na ibu oke, ị ga - enwe nsogbu nke nsogbu ahụike dịka ụdị ọrịa shuga 2, ebulite cholesterol, ọbara mgbali elu, ọrịa obi na - akpata ọrịa obi, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa cancer na nkwonkwo mgbu. Ka ewere abaghị uru ma ọ bụ na-ebucha, anyị na-emega ahụ mgbe ọ bụla ma ọ bụ na-aṅụ ọgwụ ọjọọ bara ụba. Ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnwale mmega ahụ n'ihu, na enweghi mmetụta ọ bụla. Ịme obere ihe ma dị mma maka ihe oriri na ndụ gị nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu ma belata ihe ize ndụ nke ịmepụta nsogbu ahụ ike. Dịka ọgwụ ọjọọ egwu, Olistat na-arụ ọrụ site na igbochi enzymes (lipases) site na ịkụda abụba n'úkwù na ikwe ka ọ gafee ahụ ahụ n'enweghị nsogbu. Nke a na - ebelata ọnụ ọgụgụ nke calories nke anụ ahụ na - etinye na ya. Ọ bụ ụdị ihe ọkụkụ sitere n'okike nke osisi, enweghi mmetụta dị egwu ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, Orlistat raw powder, na nri dị mma, anyị nwere ike inwe ndụ dị mma. hụrụ ya n'anya ịzụta Orlistat ntụ ntụ.
A na-ejikarị mkpụrụ osisi Orlistat eme ihe maka ịmalite mkpụrụ Orlistat ntụ ntụ, Orlistat raw capsule, iji mee ọgwụ pụrụ iche maka ọnwụ abụba. Uru nke Orlistat ntụ ntụ na-enye ohere ka mmadụ hapụ 20% nke arọ ahụ na-efu maka anụ ahụ na-adọta. Dịka ọgwụ a na-egosi na ọ bụ ọgwụ ọjọọ, Orlistat raw powder nwere uru a na-apụghị ịgbagha agbagha karịa ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ dịka ntụgharị uru mgbe ọ kwụsịrị ịgwọ ọrịa. n'ihi usoro kachasị elu nke arụ ọrụ ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị na-enweghị ọgwụgwọ, na-eme dịka ihe mgbochi megide uru uru, yana ọrụ dị mma ma wedata oke ọrịa dịka hypotension, ọrịa shuga, atherosclerosis na cholesterol.
N'oge a na-agwọ ọrịa maka Orlistat ntụ ntụ arọ ọnwụ ọgwụ, karịa mmadụ 30,000 so na ọmụmụ ihe ahụ. Kemgbe nkwado ya, ihe karịrị nde mmadụ 13.5 ewerewo Orlistat raw ntụ ntụ na-efu oke ibu. Orlistat ntụ ntụ ka edere aha dịka ọgwụ na-efu ọnwụ na mba 149 n'ụwa. Orlistat raw ntụ ọka gụnyere:
A na-amụrụ ọtụtụ nkuzi nke akwukwo Orlistat ọtụtụ ọtụtụ nsogbu. N'ime usoro ikpe ikpe, ọnụọgụ dị arọ ma ọ bụ Orlistat ntụ ntụ ma e jiri ya tụnyere placebo na nri, bụ 50 percent elu. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ike idafu 6 n'arọ na nri mgbe niile, ị nwere ike idaba na 9 n'arọ na Orlistat ntụ ntụ. Ọzọkwa, e gosipụtara na ndị na-ewere Orlistat raw powder na-akwa ụda dị njọ karịa otu ebe. Iji nweta kachasị irè site na Orlistat ntụ ntụ, a ga-ewere capsule ya na nri ọ bụla (ihe kachasị nke 360mg n'ụbọchị), tupu, n'oge, ma ọ bụ ruo 120mg (a capsule) awa mgbe ọ bụla nri. Ọ bụrụ na ịchọta nri ma ọ bụ nri anaghị eri abụba ọ bụla, ịkwesighi iburu ya.
7.Olee ubu arọ ka m ga-atụfu ma ọ bụ Orlistat ntụ ntụ?
Ọ bụ ezie na Orlistat ntụ ntụ bụ mmeri ọgwụ nfe bara uru, ọ bụghị ọrụ mmanu ibu arọ. Ọ dị mkpa ka ị jikọta ya na nri nwere gburugburu 30 pasent nke calorie na-esite na abụba, tinyere imega ahụ. Ibu ibu gi na-adabere n'otù ike i na-etinye n'ime ugwo ike ahu gi na-eji. Ọ bụrụ na ị na-eri calorie ole na ole karịa ka ị na-ere ọkụ, ị ga-atụfu ibu n'ihi na ahụ gị ga-abanye n'ime ụlọ ahịa ya iji nweta ume. Orlistat ntụ ntụ dị irè iji gbochie nsị absorption site na nri gị nke ga-enyere belata gị oriri zuru ezu calorie. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkụda calorie gị na-eri nri banyere ihe dịka calories 500 kwa ụbọchị. Nke a ga - eme ka ọnyà 1 lb n'izu ọ bụla, nke bụ ezigbo ọnwụ.
Orlistat ntụ ntụ na-abịa n'ụdị capsule. A na-ewere ya ọnụ ugboro atọ n'ụbọchị, ma ọ bụ nri nke nwere obere abụba, ma ọ bụ ruo otu awa mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na ị na-eri nri na-abaghị uru, dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị wụfuo ya. Enwetụla ọgwụ karịa ka akwadoro.
Ọ dị mkpa ịgbaso obere calorie, nri na-abụchaghị abụba mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Ọ bụrụ na ị na-eri ọtụtụ ihe oriri dị oke egwu, ọbụlagodi otu nri dị oke dị ka osikacha dị nro, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe mmetụta ndị na-akpata nsị. Họrọ anụ nke anụ na abụba dị ala. N'izugbe, ọ bụghị karịa 30% nke calorie gị na nri ọ bụla kwesịrị ịba abụba.
Ọ ga-adịkwa mkpa ka ị na-ewere ọtụtụ vitamin A, D, E, K, na beta carotene mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Ihe na-egbochi ọgwụ na-egbochi ọgwụ ọjọọ na-eme ka o siere gị ike ịmịnye vitamin ndị a na-esote abụba. Ejila vitamin na Orlistat raw powder n'otu oge nke ụbọchị ahụ.
Orlistat ntụ ntụ bụ nanị akụkụ nke usoro ọgwụgwọ zuru ezu nke na-agụnye nri, mmega ahụ, na ịchịkwa oke. A na-etinye òkè gị kwa ụbọchị na abụba, protein, na carbohydrates na-eri nke ọma kwa ụbọchị. Soro nri gị, ọgwụ, na mmega ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-azọ nri ma ọ bụ na ị na-eri nri nke na-enweghị abụba ọ bụla, gbanye ntanye Orlistat ntụ ntụ maka nri ahụ.
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ka ị na-ewere vitamin na ịnweta ihe nchịkọta ka ị na-ewere Orlistat raw powder. Ngwurugwu a nwere ike ime ka o sie ike ka ahụ gị nwee ike ịmịnye vitamin ndị nwere abụba, dịka vitamin A, D, E, na K. Soro ntuziaka dọkịta gị gbasara ụdị multi-vitamin ma ọ bụ ịnweta mgbakwunye iji mee ihe.
Were vitamin ma ọ bụ mgbakwunye gị n'oge ụra, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala 2 awa tupu ma ọ bụ mgbe ịchọrọ Orlistat ntụ ntụ.
Echekwala na ụlọ okpomọkụ na mmiri na okpomọkụ. Debe kalama ahụ mechie. Kpochapu Orlistat ntụpu ọ bụla ma ọ bụrụ na ụbọchị njedebe na akara ọgwụ ahụ agafeela.
Leba anya na onu ogwu a na eji obo ohuru obula. Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ nwere ike iji ya mee ihe dịka enyemaka dị arọ, ma ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eji ọgwụ gị eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị maọbụ na-enweghị ndenye ọgwụ.
Ngwado ọgwụ ọgwụ akwadoro maka Xenical bụ otu capsule (120 mg) ugboro atọ kwa ụbọchị.
Ntụziaka a tụrụ aro maka alli bụ 60 mg ugboro atọ kwa ụbọchị.
A ghaghị iwere nkuzi Orlistat otu awa mgbe ma ọ bụ n'oge nri nwere ihe gbasara 15 mg nke abụba. Nri na-enweghị abụba achọghị Orlistat ntụ ntụ.
Enweghi uru ọzọ ka egosiri mgbe a na-ewere Orlistat raw powder na doses karịrị 120 mg.
Ndị ọrịa kwesịrị iri nri nri calorie kwesịrị ekwesị, belata kaadị calorie nke nwere ihe dịka 30% nke calorie si abụba.
Orlistat ntụ ntụ na-agụnye ihe a na-akwado n'usoro ihe nkwụnye ego maka ọnụọgụ abụọ.
Ụfọdụ vitamin nri na-ejikọta na abụba (vitamin A, D, E na beta- carotene). Mgbe a na-ewepu Orlistat ntụ ntụ, a naghị etinye uche na vitamin ndị a ma na-ekpochapụ n'ime stool na ụba buru ibu tinyere abụba. Ya mere, ndị na-arịa ọrịa na-ewere Orlistat raw powder kwesịrị iji multivitamin nwere "vitamin-soluble" vitamin iji jide n'aka na ọtụtụ vitamin dị maka absorption. Iji hụ na vitamin ndị dị na multivitamins adịghị abụ abụba dịka vitamin ndị ahụ na nri, a ghaghị iwere multivitamin dịkarịa ala awa abụọ tupu ma ọ bụ ọtụtụ awa mgbe Orlistat ntụ ntụ.
10.Which ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ nkwakwunye na Orlistat ntụ ntụ?
Mmetụta ọbara nke warfarin (Coumadin, Jantoven) na-adabere na vitamin K n'ime ahụ, vitamin K bụkwa otu n'ime vitamin ndị na-ejikọta abụba. Ndị ọrịa na-enweta aghafarin bụ ndị malitere Orlistat ntụ ntụ kwesịrị ikwekọ ọbara ha nke ọma n'ihi na Orlistat raw ntụ ntụ nwere ike ime ka ọtụtụ vitamin K kwụsị. Nke a ga - eme ka mmetụta nke aghafarin na - ebute ma mee ka ọbara ọgbụgba na - ezighị ezi pụta. Enweghị ihe na-egosi na enwechaghị vitamin K na ndị ọrịa na-ewere Orlistat ntụ ntụ.
Orlistat raw powder nwere ike belata absorption na ọbara ọkwa nke cyclosporine (Sandimmune) mgbe a na-ejikọta ọgwụ abụọ ọnụ. Ya mere, a ga-enye cyclosporine awa abụọ tupu ma ọ bụ mgbe ọ bụla Orlistat ntụ ntụ, ọ ga-adị mkpa ka ị hụkwuo ọkwa cyclosporine.
A kọọrọ Hypothyroidism mgbe Orlistat ntụ ntụ na levothyroxine (Synthroid, Levoxyl, Levothroid, Unithroid) jikọtara. Ndị ọrịa emeso ma Orlistat raw ntụ ntụ na levothyroxine kwesịrị nyocha maka mgbanwe na ọrụ thyroid. A ghaghị iwere Orlistat ntụ ntụ na levothyroxine ma ọ dịkarịa ala awa anọ iche.
N'ihi na Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na igbochi absorption nke abụba nri, o yikarịrị ka ị ga-enwe mgbanwe ụfọdụ n'ime àgwà obi. Ihe ndị a na-emekarị n'oge izu ụka mbụ nke ọgwụgwọ; Otú ọ dị, ha nwere ike ịnọgide na-eji Orlistat raw ntụ ntụ.
Mgbanwe ndị a nwere ike ịgụnye
gas na ihapu
mkpa ngwa ngwa ịga ụlọ ịsa ahụ
mmanu mmanu ma obu abuo
ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmegharị obi
enweghi ike ịchịkwa mmeghari obi
N'ihi ọnụnọ nke abụba a na-enweghị atụ, mmanụ ahụ a hụrụ na steeti ụkwụ nwere ike ịdị ọcha ma ọ bụ nwee agba dị ka oroma ma ọ bụ aja aja.
Mgbanwe ndị a na-eme ka ọkpụkpụ a bụ mmetụta dị mma nke igbochi abụba ka ọ ghara itinye obi ma gosi na Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ. Ha na-emekarị n'oge na-agwọ ọrịa, karịsịa mgbe nri ndị nwere abụba dị elu karịa ka akwadoro. Mgbaàmà ndị a na-adịru nwa oge ma nwee ike ibelata ma ọ bụ na-apụ n'anya ka ị na-aga n'ihu ọgwụgwọ ma nọgide na-eri nri ị tụrụ aro maka nri ndị nwere ihe karịrị 30% abụba. Otú ọ dị, mmetụta ndị a nwere ike ime na ụfọdụ ndị mmadụ karịa oge 6 ma ọ bụ karịa.
N'ebe ndị toro eto na-eto eto na-emeso Orlistat raw powder, mmetụta ndị e depụtara na-emetụta ihe ndị ahụ na-ahụ maka ndị okenye.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nchegbu gbasara ihe ndị a ma ọ bụ mmetụta ọ bụla ọzọ ị na-enweta mgbe ị na-ewere Orlistat ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
12.Orlistat ntụ ntụ na-egbu egbuỌ bụ ezigbo nhọrọ maka m?
Q3: Ụdị ihe ndị dị aṅaa na-abaghị uru ka m ga-ewe?
A3: N'ahịa, e nwere ihe dị iche iche na-abaghị uru, ụfọdụ nwere ike ida ngwa ngwa ngwa ngwa kamakwa nwere mmetụta dị egwu, ụfọdụ na-enwe mmetụta dị nta, na-efunahụ mmiri na ahụ gị ma gaghachi. ọ dịghị mmetụta ọ bụla, Orlistat ntụ ntụ bụ ụdị ụdị ndị a, ụfọdụ na-ewere Orlistat raw powder na Orlistat ntụ ntụ, nke bụ isi nke isi mmalite.
A4: Orlistat raw powder is different from the other forms, ọ bụ nke dị ọcha dị ọcha ma dị mfe iji, ọ bụrụ na ị bụ abụba ndị na-ere ngwaahịa na-emepụta, ị nwere ike itinye Orlistat ntụ ntụ ka kọfị, candy, na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na onye ọrụ onwe, anyị nwekwara ike iburu ya. Ọtụtụ ndị na-azụta Orlistat ntụ ntụ na weebụ ma tinye ya na kọfị ma ọ bụ were ya ozugbo mgbe nri.
Q5: Ebee ka m nwere ike ịzụta oke ọcha Orlistat raw powder?
13.Orlistat ntụ ntụ VS Sibutramine ntụ ntụ
Orlistat ntụ ntụ nwere ike ịbụ ntakịrị irè karịa sibutramine na mbenata ibu ahụ. Ọ bụ ezie na Orlistat raw ntụ ntụ na sibutramine enweghi obi abụọ na-efu, mmetụta dị mma. Orlistat ntụ ntụ, ma ọ bụ sibutramine nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ buru oke ibu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọgaranya.
Orlistat ntụ ntụ nwere ike ịdịkwu ike iji melite njikwa glucose ọbara.
A na-ejikọta ọgwụ ntuziaka nke Orlistat iji nwayọọ nwayọọ belata ọbara mgbali
Abụọ ọgwụ nwere nkwanye profability profaịlụ. Sibutramine dị mma karịa ka Orlistat raw powder1. Otú ọ dị, a na-eme ka ndị na-ebute ọrịa na-arịa ọrịa na-akpata nkwonkwo na-arịa ọrịa obi mgbarụ, ọrịa obi mgbarụ mmiri, arrhythmias, ọrịa strok, ma ọ bụ ndị na-enweta ọgwụ mgbali elu.
Mmetụta kachasị emetụta ya na Orlistat ntụ ntụ bụ ntụnye mmanu, ịdị ọkụ n'obi na ime ihe ngwa ngwa. Na mmetụta ndị sibutramine bụ isi ọwụwa, ọnụ ala na anorexia. Sibutramine nwekwara ike iweli mgbali elu na mkpali obi.
14.Phentermine uzuzu VS Orlistat ntụ ntụ
Phentermine na Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ abụọ kachasị ewu ewu na ụwa nke a na - eji maka mgbatị dị arọ na ọgụ megide oke. Mgbochi ndị a nwere ike ịlụ ọgụ n'ụzọ dị irè, ma onye ọ bụla n'ime ha nwere mmetụta dị iche iche na-emepụta ọgwụ na ahụ onye ọrịa.
Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ, nke anaghị emetụta agụụ, ma enwere ike iji ya mee ogologo oge, n'adịghị ka Phentermine. Orlistat raw na-egbusi ma ọ bụ ọbụna na-egbochi ihe nke enzymes nke na-emetụta ọkpụkpụ abụba na eriri afọ (GIT). Nke a na - enye ahụ ahụ aka maka 30% nke abụba ndị na - eri nri, na - enweghị agbanwe.
Akpọrọ mkpụrụ ọgwụ Orlistat maka ntụsara ahụ maka ihe oriri. Ebe ọ bụ na 2007, a na-enweta obere ọkpụkpụ nke Orlistat ntụpọ na ụlọ ọgwụ na EU na USA na-enweghị ọgwụ (Alli). Orlistat raw powder 120 mg (Xenical) dị naanị site na ndenye ọgwụ.
N'adịghị ka Phentermine, a ghaghị iji ọgwụ ọkpụkpụ Orlistat mee ihe tupu ọ bụla oriri. Ọ bụrụ na ihe oriri nwere ntakịrị abụba, ị nwere ike ịkwụsị izu nke Orlistat ntụ ntụ. Ekwesighi ka akwadoro 3 ogwu Orlistat powder 120 mg kwa ubochi, ebe obu na ihe a adighi eme ka mmuta nke Orlistat powder drug.
Phentermine bụ ọgwụ anorexigenic na-akpali ụbụrụ ma na-ebelata agụụ. A na-eji Phentermine eme ihe maka ịgwọ ọrịa ibu kemgbe 1959. Taa, ọ bụ ọgwụ ọgwụ kachasị mma maka ọgwụ oke ibu na USA. Ndị mmadụ nwere ike ịzụta Phentermine na ọgwụ ndị ahịa US site na ndenye ọgwụ naanị.
A na-eji ọgwụ phentermine slimming mee ihe iji mee ihe ọnụ na-enweghị ike iji ya mee ihe karịa izu 12. Ndị ọrịa kwesịrị iji Phentermine dị ka 1 pill kwa ụbọchị. Ọtụtụ mgbe, ego a na-ezuru inwe ndidi anaghị enwe agụụ n'oge nri. A na-atụ aro ka ị gaa Phentermine n'ụtụtụ; nke a na-enye ohere iji belata ohere nke mmetụta dị otú ahụ dị ka ụra nke ụra.
Phentermine na Orlistat ntụ ntụ mmetụta
Phentermine na Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ dị egwu nke na-enyere aka ịkwụsị ibu, mana n'oge mmetụta ha nwere ike ịpụta. Phentermine nwere ike ime ka mmetụta dị ịrịba ama na CNS na usoro obi. Ya mere, mmetụta ndị kachasị emetụta Phentermine bụ:
Dyspnea ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ na-eku ume;
Mmetụta mmetụta uche ma ọ bụ ejighị n'aka;
Ọbara mgbali elu;
Gbanwee na obi;
Ịda mbà n'obi.
Tụkwasị na nke ahụ, ọgwụ Phentermine nwere ike ime ka ụfọdụ mmetụta ndị dị na GIT: ọnụ mmiri, njigide ma ọ bụ na-aga n'ihu, ọgbụgbọ ma ọ bụ ịme agbọ.
Mmetụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-edozi ahụ na-emepụta na GIT. N'ihi ya, mmetụta kachasị emetụta nke Orlistat ntụ ntụ na-ejikọta na nsogbu nke GIT. Mmetụta dị egwu nke Orlistat raw powder na-adabere n'ụdị abụba na nri. Ndị a bụ:
Mmegharị obi na-emekarị;
Mmanụ na-esi na ntanetị;
Ọhụụ na bloating.
Ewezuga nke ahụ, Orlistat ntụ ntụ nwere ike ime ka mmetụta CNS, dịka ọmụmaatụ, mebiri ụda ụra, isi ọwụwa na mmebi nke nghọta gbasara ohere.
N'ịkọwa ihe niile dị n'elu, anyị nwere ike ikwubi na ọ dịghị ihe dịka ihe ngwọta zuru oke maka oke ibu. Ngwá ọ bụla nwere ọgwụ ndị ọ na-etinye na ya. Ị nweta ọtụtụ ọgwụ ọjọọ maka ọgwụgwọ oke ibu na-enye ohere ịhọrọ ezigbo mgbanwe maka onye ọrịa ọ bụla.
15.Abara uru nke ịzụta Orlistat ntụ ntụ ntụ ntụ site:
3) AAS bụ otu n'ime ndị na-ebu ihe ndị nwere ike ịdabere na steroid na ngwaahịa kachasị mma, nchekwa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mkpụrụ ntụ Synephrine ọ na-enyere aka maka ibu arọ?	Ịzụta Bupropion HCL ntụ ntụ: eji, usoro onunu ogugu, mmetụta ndi ozo